Maitiro Ekushandura Terminal Mirairo kuita Zvishandiso Ndinobva mac
Kuburikidza neTerminal, tinogona ita nhamba yakakura yezviito kuti isu hatigone kuwana natively mune inoshanda sisitimu pachayo, asi mune mamwe echitatu-bato kunyorera. Vazhinji vedu tiri vashandisi avo vane tsika yekushandisa iyo terminal kuti vaite zviito zvakadai sekuvanza mifananidzo yedesktop, kutangazve iyo Tsvaga ...
Iyi mitsara yekuraira, iyo kana isu tichiziva kwazvo nezve macOS, hazvisi nyore kudzidza uye isu tavanongedzera muchirongwa cheManotsi, kutevedzera nekuteedzera mirairo kana tangovhura Terminal. Maitiro aya iko kutambisa nguva isu kwatinogona kuita otomatiki kuburikidza neMagetsi.
Automator, sezita rayo zvarinotsanangura zvakanaka, inotibvumidza kuti tiite akateedzana ezviito pamwechete nekudzvanya bhatani. Zvakare, zvinotibvumidza kumhanyisa Terminal yekuraira mitsara kuti tiite izvo zviito zvisingawanikwe natively mu macOS. Pano tinotsanangura matanho ekutevera chinja Terminal yekuraira mitsara kuita mafomu.
Chinja Terminal Command Lines kuApplications
Chinhu chekutanga chekuita kuvhura Automator, chishandiso chinowanikwa mukati mefaira rinoshandiswa mukati meLaunchpad. Tevere, muhwindo rinoratidza iyo maOmator mafaira isu atakagadzira kare (kana isu takagadzira chero), tinya pa repazasi kuruboshwe kona Nyowani gwaro.
Mu Sarudza gwaro mhando hwindo, Ngatipukutei paKushandisa. Munguva iyi, isu tinoda kushandura tambo yekuraira kuti ive chishandiso kuitira kuti kana ichinge yamhanya, inongotarisira yekuvhura terminal uye kuita iyo tambo kana mitsara.
Zvino mukoramu Acciones, tinya pa Utilities uye mukati mekushandisa, mukudonhedzera uko kunoratidzwa kurudyi mu Mhanya iyo Shell script
Ipapo tinonyora iyo / s mutsara mutsara / s kuti isu tinoda kumhanya otomatiki mubhokisi remavara.
Chekupedzisira, tinofanira kuzvinyora zvine zita iro titendere isu kukurumidza kuziva chiiko chiito chako.
Kana isu tikachengeta izvi zvinoshandiswa mukati meiyo iCloud Automator dhairekitori, tinofanira gadzira nzira pfupi (Alias) kukwanisa kuiisa pane desktop, mune doko rekushandisa kana chero imwe nzvimbo kuti ugare uine izvozvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro Ekushandura Terminal Mirairo kuita Zvishandiso
Mwedzi mumwe wakasununguka weApple Music "zvakare"